I-Semalt ichaza ukuthi kungani umuntu kufanele avimbele amabhulokhi kanye nabaqambi be-website
Kuphephile ukusho ukuthi imibono eminingi efika kuwebhusayithi yakho iphuma emithonjeni engewona umuntu futhi engeyona yangempela, futhi akunjalo ngoba kufanele uyilahle uma ufuna ukubona iwebhusayithi yakho ikhula isikhathi sokuphila. Uma unomuzwa wokuthi ukuhamba kwebhola kuhle futhi kunokwethenjelwa, wenza iphutha elikhulu njengoba kungenza i-Google ikhubaza i-akhawunti yakho ye-AdSense. Ngokuvamile, i-bots ibonakala njengomgwaqo wesintu ku-Google Analytics, kodwa kwakungewona izinyanga ezedlule. Lezi zinsuku, amaphesenti angaphezu kwezingamashumi ayisikhombisa emgwaqweni owenziwe amawebhusayithi amancane avela ku-bots kanye nemithombo yamanga. U-Max Bell, uchwepheshe we-Semalt , uxwayisa ukuthi i-bots izama njalo ukufika kusayithi lakho ngezindlela eziningi, futhi kungenzeka ukuthi awukwazi ukuyiqeda.
Inombolo ebalulekile yebhobhu evakashela amasayithi akho ayikho into engafanele futhi engenamsebenzi; ngisho ziwusizo kumakhasi akho ewebhu uma efika encane - para que es el iso en camara digital. Amanye amabhodi amahle, isibonelo, asetshenziswa yi-Google ngokwayo ukuthola okuqukethwe okusha ku-intanethi. Cishe wonke injini yokusesha isebenzise ama-bots okuhle ukukhomba ikhwalithi yezihloko. Indlela abakhetha ngayo ikhwalithi ishintshiwe, manje isebenzisa ukusetshenziswa kwezinsizakalo ezinkulu zesofthiwe ye-swarm..Ama-swarms alandela izixhumanisi, gxuma kusuka kwesinye isayithi kuya kwesinye, bese ubhala okuqukethwe okusha nokushintshiwe. I-Google bots iyinkimbinkimbi, ngezimiso ezijulile zemithetho ezingabusa ukuziphatha kwazo. Isibonelo, umyalo we-NoFollow ohlangothini owenzela ukuthi ungasebenzi kahle futhi awubonakali ku-Google bots.
Izinkinga ezimbi yizo ezonakalisa isayithi lakho futhi azikwazi ukunikeza noma iyiphi inzuzo. Bahlolisiswa ngamabomu futhi bathole ngokuzenzakalelayo indexed ngokuzenzakalelayo. Okuqukethwe kwakho kuboniswa kokubili kubantu namabhu, ukungazinaki ikhwalithi nobuqiniso. Amabhodi amabi azinaki iziqondiso zebhobhothi futhi angasebenzisi izivimbela ze-IP ukulondoloza ikhwalithi yamakhasi akho wewebhu. Enye yezinkinga ezinkulu kulezi bots ukuthi okuqukethwe kunzima ukukhomba futhi kuhlale kufihliwe emphakathini ngenkathi kuhlale kuvulekile kubaduni abangase bafinyelele amafayela akho ukuze uhlelo lwakho lubekwe eceleni. Kukhona ne-spam bots futhi engalimaza ukusebenza komsebenzi wakho jikelele. Bagcwalisa isayithi lakho ngemilayezo echazwe ngaphambilini, okwenza abathengisi ababambisana bazizwe bebi.
Ingabe Kufanele Uvimbele Amabhuzu?
Uma uthola njalo imibono evela kuma-bots, kungenzeka ukuthi akudingeki ukuthi kuvinjelwe. Kodwa uma uthola imibono evela kubhubhu embi, ungase ucabange uzivimbela. Kufanele uvimbele i-Googlebot, ekhona lapho ukususa isayithi lakho emiphumeleni yenjini yokusesha. Ngakolunye uhlangothi, kufanele nakanjani uvimbele ama-spambots. Uma uyazi ngokuvikelwa kwesayithi lakho kusuka ku-DDOSing, kubalulekile ukuvimbela amakheli we-IP ama-bots kanye nogaxekile. Khumbula njalo ukuthi ama-bots angeke akhathalele ngamafayela akho we-robot.txt, okubi kakhulu kusukela ukuvikelwa kwaleli fayela kuvunyelwe ukukhula kwesayithi lakho kanye nokusebenza kwayo jikelele.